ဘ၀လက်တွဲဖော် | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
March 28, 2008, 2:40 am Filed under: Lin Let Kyal Sin, My Opinion `ဘ၀လက်တွဲဖော်´တဲ့ .. ။ ခေါင်းစဉ်လေးက နူးညံ့သလို အကြောင်းအရာလေးကလည်း စိတ်ကူးတွေနဲ့ရေးဖွဲ့နိုင်တာမို့ မမစိုးဝှက် TAG လုပ်လုပ်ချင်း ရေးခဲ့ချင်တယ်။ ရင်ထဲမှခံစားမှုနဲ့ပဲရေးခဲ့ချင်တဲ့အတွက် အချိန်ယူပြီး အခုမှပဲရေးဖြစ်ပါတော့တယ်။
၁) ကျွန်မ သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရပါမယ်။ ကျွန်မကိုလည်း သိပ်ချစ်တဲ့ သူ ဖြစ်ရမယ်။ အချစ်တစ်ခုတည်းအတွက် အခြားစံနှုန်းတွေ တစ်ခုမှမရှိဘဲ ကျွန်မလက်မတွဲသလို အချစ်မပါဘဲနဲ့လည်း ကျွန်မ လက်တွဲလို့ရမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မရဲ့အချစ်ကလည်း ကျွန်မသဘောကျတဲ့ အချက်တွေကပဲ စတင်ခဲ့တာမို့ ဒီအရာမှာ ကျွန်မဆန္ဒပြည့်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ ၂) မြန်မာလူမျိုး ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရပါမယ်။
မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ တိုင်းရင်းသားတွေလဲ အကုန်ပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်မက မြန်မာလူမျိုးအစစ်ဆိုတော့ မြန်မာသွေးဖြစ်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားချောချောလေးတွေ မြင်ရင်လည်း အရင်တုန်းက စိတ်ဝင်စားဖူးပါတယ်😀 ။ လူမျိုးမတူသူကို အချို့က လက်ခံလို့ရပေမယ့် ကျွန်မအတွက်တော့ နှလုံးသားက လှုပ်ရှားလို့တောင်မရပါဘူး။ ဘာသာတိုင်းကို ကျွန်မလေးစားပါတယ်။ ကျွန်မဘ၀လက်တွဲဖော်ကို ကျွန်မ ဘာကြောင့် ဘာသာတူချင်လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ဘ၀ခရီးတွေ ၊ စာပေတွေနှင့်ပတ်သတ် စကားအဖြစ်ဆွေးနွေးဖလှယ်တိုင်း ဘာသာမတူရင် စကားအမြဲပြောရခက်နေမှာ ကျွန်မ မလိုလားလို့ပါ။ အလှူအတန်းပြုလုပ်တာတွေ ၊ ဘုရားစေတီအတူတည်ချင်တာတွေ ကျွန်မစိတ်ကူးထဲမှာရှိတဲ့အတွက် ဘာသာတူဖို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်မက မြန်မာဆန်ဆန်လေးဝတ် ၊ ကျွန်မချစ်သူဘ၀လက်တွဲဖော်ကလည်း ခပ်ရိုးရိုးလေးဝတ်ပြီး ဘုရားအတူတက်ဖို့ပဲ ကျွန်မ ဆန္ဒရှိပါတယ်။
၃) ပညာတတ် ၊ ထူးချွန်သူဖြစ်ရမယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ် အလုပ်ကိုင်ကောင်းတစ်ခုရှိရမယ်။ `ပညာ´ဆိုတာ ဘ၀အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သောအရာတစ်ခုပါ။ ပညာတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်မှာ အမှား ၊ အမှန် ၊ ဖြစ်သင့်တာ ၊ မဖြစ်သင့်တာကို အတိုင်းတာတစ်ခုထိ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ထူးချွန်တဲ့အပိုင်းကျတော့ ကျွန်မနည်းနည်းလောဘပိုကြီးတယ်ပြောရမလား မသိ ။ ကျွန်မက ကျွန်မထက်အနည်းဆုံး ၂ဆလောက်ထူးချွန်တဲ့ယောက်ျားမှ သဘောကျလေ့ရှိတယ်။ အလွန်အကျွံကွာသွားရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။ သိပ်လည်းမကွာ ၊ ထပ်တူလည်းမကျ ထူးချွန်တဲ့ယောက်ျားဆိုရင် ကျွန်မစိတ်က လေးစားမှုတစ်ခုပိုတိုးသွားလို့ပါ။ တစ်နေ့ ကျွန်မဘ၀မှာ မိသားစုဆိုတာလေးရှိလာခဲ့ရင် ကျွန်မရဲ့သားသမီးတွေအားလုံးက မိခင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်တည်မှုကို လေးစားချစ်ခင်သလို သူတို့အဖေရဲ့ ထူးချွန်ထက်မြက်မှု ၊ အရည်အချင်းကောင်းတွေအားလုံးကို အတုယူအားကျရတဲ့ သူပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
၅) စိတ်ဓါတ်ကောင်းရပါမယ်။ ယောက်ျားပီသရမယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်ရမယ်။ လူတွေက ရဟန်းတာတွေမဟုတ်တဲ့အတွက် အပြည့်မ၀မကောင်းပေမယ့် အထိုက်အလျောက် စိတ်ဓါတ်ကောင်းဖို့တော့ ကျွန်မ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်မနှင့်ပတ်သတ် ရိုးသားရမယ် ၊ စိတ်နှလုံးသားနူးညံ့ရမယ် ၊ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ပြောတတ်ဆိုတတ် လုပ်ကိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါပဲ။ ယောက်ျားပီသရမယ်ဆိုသောအချက်တွေက စိတ်ဓါတ်ပေါ်ကိုပဲ ပြန်အခြေခံပြောတာပါ။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆိုရင် လေးစားအထင်ကြီးရိုသေနိုင်တာမို့ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ကျွန်မဘက်က အကောင်းဆုံးမဟုတ်ခဲ့သည့်တိုင် အပြန်အလှန်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
၆) တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ချစ်ခင်ကြင်နာပြီး သစ္စာရှိသူလည်းဖြစ်ရမယ်။ သစ္စာဆိုတာကို ဦးခေါင်းပေါ်ရွက်တင်တဲ့အထိ လိုချင်တဲ့ကျွန်မအတွက် သစ္စာတရားက မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုပါ။ သစ္စာတရားကိုထိရင် ရန်သူဖြစ်လောက်တဲ့အထိ စိတ်ကြီးတဲ့ကျွန်မအတွက် ကျွန်မဘ၀လက်တွဲဖော်က သစ္စာတရားနဲ့ပတ်သတ် အင်မတန်စောင့်ထိန်းလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်။
၇) နားလည်မှုအပြန်အလှန်ပေးနိုင်ရမယ်။ သူ့ဝါသနာ ၊ ကျွန်မ၀ါသနာ နားလည်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်။ `နားလည်မှု´ဆိုတာ တော်တော်တော့ ကြိုးစားတည်ဆောက်ရသောအရာတစ်ခုပါ။ တစ်ယောက်ရဲ့အကျင့် ၊ စိတ်ဓါတ် ၊ ပြုမူနေထိုင်ပုံအစရှိတာတွေကို အသေးစိပ်နားလည်ပေးရတာကအစ နားလည်မှုက နေရာတိုင်းလိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ရည်မှန်းချက် ၊ ကျွန်မဖြစ်ချင်သောအရာတွေကို နားလည်မှုပေးပြီး ကျွန်မဘေးကနေ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ပေးနိုင်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ရပါမယ်။ သူ့ဝါသနာ ၊ သူဖြစ်ချင်တာ ၊ သူလုပ်နိုင်တာတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြောဆိုပြီး ကျွန်မဘက်ကလည်း အပြန်အလှန်နားလည်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးစိတ်ကိုမွေးမြူထားရပါတယ်။
ကျွန်မက ပွင့်လင်းမှုကို သဘောကျတယ်။ ကျွန်မနဲ့တစ်ဘ၀လုံးလက်တွဲသွားရမယ့် ဘ၀လက်တွဲဖော်က သူ့ဘ၀မှာ သူကိုယ်တိုင်ပြီးရင် ကောင်းတာ ၊ ဆိုးတာ အားလုံးကို သိရှိနားလည်သူက ကျွန်မပဲဖြစ်ရမယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း ဖွင့်ဟမပြောဘဲ စိတ်ထဲမှာ သိမ်းထားတတ်တဲ့ အကျင့်မရှိသူမို့ ပွင့်လင်းသူကို သဘောကျတယ်။ မြုံစိမြုံစိယောက်ျားတွေကို ကျွန်မ သဘောမကျသလို တစ်ခုခုဆို မပြောဘဲ စိတ်ထဲမှာ သိမ်းထားတာကိုလည်း ကျွန်မ သဘောမကျဘူး။ ဘ၀မှာ ကောင်းတာ ၊ ဆိုးတာ ၊ ပျော်ရွှင်စရာ ၊ စိတ်ညစ်စရာ ၊ ၀မ်းနည်းစရာ အားလုံးကို ကျွန်မနဲ့မျှတူခံစားနိုင်ဖို့အတွက် ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ တိုင်ပင်တတ် ၊ အသိပေးတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။၁၀) မိသားစုကိုခင်တွယ်စောင့်ရှောက်သူဖြစ်ရမယ်။
၁၁) ကျွန်မကိုချစ်ခင်အလိုလိုက် ၊ အလျှော့ပေးရမယ်။ ကျွန်မနှင့် ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကြင်နာစွာနေထိုင်တာကို သဘောကျပါတယ်။ ကျွန်မက အငယ်လုပ်ချင်သူပီပီ နည်းနည်းတော့ ဆိုးနွဲ့တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအရာတွေကို ချစ်စနိုးနဲ့အလိုလိုက်နိုင်သူဖြစ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ အချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် အနည်းငယ်ဇွတ်တရွတ်နိုင်ပြီး အချို့နေရာတွေမှာတော့ အေးအေးဆေးဆေး လိုက်လျောတတ်တာမို့ ဒီနှစ်ခုလုံးကြားမှာ ကျွန်မအကျင့်ကို နားလည်ပေးနိုင်ရင်တော့ ကျွန်မပိုစိတ်ချမ်းသာမှာပေါ့။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ကျွန်မချစ်သောသူဆိုရင် အလိုလိုက် ၊ ဦးစားပေးသော အကျင့်ရှိသူမို့ အပြန်အလှန်ပေးနိုင်တာတော့ သေချာပါတယ်။
၁၂) စစ်ဗိုလ် ၊ စစ်သား လုံးဝမဖြစ်ရ .. ။ အိမ်နှင့်ကင်းကွာစွာ အလုပ်လုပ်သူလည်းမဖြစ်ရပါ။ အာဏာရှင်အသိုင်းဝိုင်းက စစ်ဗိုလ် ၊ စစ်သားမဖြစ်ရသလို ထိုသူများ၏ သားသမီးလည်းမဖြစ်ရပါ။ ထိုအချက်က ကျွန်မ တစ်စက်မှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်သော အချက်တစ်ချက်။ မိမိအိမ်နှင့်ကင်းကွာစွာ အခြားအရပ်မှာ အလုပ်သွားလုပ်နေရသူလည်း မဖြစ်ရပါ။
—————-မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် ဘ၀လက်တွဲဖော်ကိုရွေးချယ်ရမှာ အခြေခံအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေက တူညီကြပါတယ်။ အခြားအချက်တွေက စိတ်ကူးတွေပေါ်မှာပဲ ကွာခြားသွားကြတာပါ။ `အချစ်´ဆိုတာ ဘ၀မှာ အရေးပါသောအရာတစ်ခုဖြစ်သလို ဘ၀မှာလည်း အခြားအရေးကြီးတဲ့အရာတွေ ရှိနေပြန်တယ်။ `အချစ်´ဆိုသော အရာကို နှလုံးသားမှာ နန်းတင်ပေးထားတာကြောင့် ကျွန်မဘက်က အိမ်ထောင်တာဝန်ဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်စားလာခဲ့တယ်။ ခေါင်းမာမှုတွေ တဖြေးဖြေးလျော့လာခဲ့တယ်။ အကောင်းဆုံး ၊ အပြေလည်ဆုံးကို မလုပ်ပေးနိုင်သေးပေမယ့် သူ စိတ်မချမ်းသာရင် ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို မလုပ်ရက်ခဲ့တာက `ချစ်ခြင်းမေတ္တာ´ကြောင့်လားဆိုတာ တွေးမိပါတယ်။
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကို ပါရမီဖြည့်ပေးနေတဲ့ သူ့လုပ်ရပ် ၊ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေထဲ အများစုအချက်တွေမှာ တူညီနေတာ `ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်´လို့ ကိုယ့်ဘက်က ကျေနပ်ရမှာပေါ့။ စိတ်ကူးတွေနဲ့သတ်မှတ်ထားပြီး လိုချင်တဲ့အချက်တွေအားလုံး ဖြစ်မလာခဲ့ပေမယ့် အများဆုံးဖြစ်လာတာကိုပဲ ကျေနပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ အချို့အရာလေးတွေမှာ `နားလည်မှု´ဆိုတာလေးကို ကြိုးစားတည်ဆောက်ပေးနေရင်း ကိုယ့်ဘက်ကလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း ပြုပြင်နေရဆဲ။ ဘ၀လက်တွဲဖော်ဆိုတာ ကံစမ်းရတဲ့ ကံစမ်းမဲအတိုင်းပါပဲ။ သူ့ဘက် ၊ ကိုယ့်ဘက် မျှော်လင့်ချက်တွေပိုမြင့်မားလေ .. ရလဒ်က အနည်းငယ်ကွဲလွဲလာခဲ့ရင်လည်း ခံစားရတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ မိမိလိုချင်သော အရာတွေရှိသလို မိမိဘက်က ပေးနိုင်ဖို့လည်း အရေးကြီးတဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးပေးအပ်နိုင်သောအရာတွေအတွက်လည်း ကြိုးစားရပါမယ်။ အရေးကြီးဆုံးက ဘ၀မှာ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားမှုတစ်ခုက ဘာပဲဖြစ်လာလာ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီး ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ပါပဲ ……… ။
Comment by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ်
March 28, 2008 @ 3:23 am Reply	စိတ်ကူးနဲ့ ထပ်တူညီတဲ့ ချစ်သူတယောက်ကို ရခဲ့တဲ့ ညီမ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ.. လျှင်မြန်စွာ လက်တွဲနိုင်ပါစေ။
Comment by myatnoe
March 28, 2008 @ 4:12 am Reply	ဘ၀လက်တွဲဖော်ဆိုတာ ကံစမ်းရတဲ့ ကံစမ်းမဲအတိုင်းပါပဲ။ သူ့ဘက် ၊ ကိုယ့်ဘက် မျှော်လင့်ချက်တွေပိုမြင့်မားလေ .. ရလဒ်က အနည်းငယ်ကွဲလွဲလာခဲ့ရင်လည်း ခံစားရတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ မိမိလိုချင်သော အရာတွေရှိသလို မိမိဘက်က ပေးနိုင်ဖို့လည်း အရေးကြီးတဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးပေးအပ်နိုင်သောအရာတွေအတွက်လည်း ကြိုးစားရပါမယ်။ အရေးကြီးဆုံးက ဘ၀မှာ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားမှုတစ်ခုက ဘာပဲဖြစ်လာလာ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီး ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ပါပဲ။
ဒီစာသားတွေကို အကြိုက်ဆုံးပဲ လင်းရေ။ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
March 28, 2008 @ 5:23 am Reply	ဟားဟားဟားဟား… မိုက်တယ်ဗျာ… အမရေ… တခြားကောင်မလေးတွေကိုလည်း ဒါမျိုးတွေ များများ တက်ဂ်ပါဦး။ ကျနော်တို့ ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး ကိုက်ညီရင် ၀င်ပြိုင်လို့ ရအောင်လို့ပါ။ အဟီး…
March 29, 2008 @ 1:12 am Reply	ဟဲ ဟဲ … ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဆုံးက ဓါတ်ပုံလေး အပေါ်ဆုံးမှာ သရုပ်ဖေါ် ပုံ အဖြစ် တင်လိုက်ပါလား ..😛
Comment by စိုးထက် - Soe Htet !
March 29, 2008 @ 2:03 pm Reply	လာလည် လာဖတ် သွားတယ် ညီမရေ🙂
Comment by MgThaJan
March 29, 2008 @ 6:04 pm Reply	အခြေခံဥပဒေကို မထောက်ခံတဲ့သူတွေဟာ သစ္စာဖေါက်တွေဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြထားပါတယ်။ http://lightofmyanmar.blogspot.com/
March 30, 2008 @ 9:24 am Reply	မမရေ… လည်လည်လာသွားပါတယ်နော်…ရေးထားတာလေးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်
March 30, 2008 @ 10:23 pm Reply	လင်းလက်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်က မျှော်ရကျိုးနပ်တယ်ကွယ်။ ဘေးကနေကြည့်တာနဲ့တင် အရမ်း romantic ဖြစ်တဲ့အတွဲလေးမို့ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်လေးဆိုတာ ယုံပြီးသားပါ။ လင်းလက်တို့ အချစ်လမ်းသာယာဖြောင့်ဖြူးပါစေ။ (btw, blogလေးက ပိတောက်ရနံ့တွေသင်းနေတာပဲ)
April 3, 2008 @ 4:35 am Reply	တခြားပိုစ့်တွေကိုလဲ ဖတ်မိတယ်။ ဒီပိုစ့်မှာပဲ ပိုစ့်အားလုံးအတွက် ရေးလိုက်တယ်။ စာဖတ်အားကောင်း၊ စာရေးအားကောင်းတဲ့သူလို့ မြင်မိတယ်။ ကိုယ့်ဘဝမှာ မျှော်လင့်ထားတဲ့ ချစ်သူမျိုးရတယ်ဆိုလို့လဲ အားကျမိပါရဲ့။ နိုင်ငံရေးအမြင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေသူ တယောက်အနေနဲ့လဲ ချီးကျူးမိပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးထဲက (စံတင်ထားတဲ့ ) အချက်တွေကို သိရတော့ အားကျမိပ။ စိတ်ဝင်စားစရာလဲ ကောင်းတယ်လို့ တွေးမိတယ်။ အမှန်ပြောရရင် အားပါး.. မလွယ်ပလားလို့လဲ တွေးမိတယ်။ ကျွန်တော်က သာမာန် ခပ်ဆိုးဆိုး လူတစ်ယောက်ကိုး…🙂
Comment by တားမြစ် ထားသော...
April 4, 2008 @ 3:48 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI